Cannavaro, walaalkii iyo xaaskiisa oo xabsiga ku jira, Maxaa lagu haystaa tolow?
HomeWararka MaantaCannavaro, walaalkii iyo xaaskiisa oo xabsiga ku jira, Maxaa lagu haystaa tolow?
Kabtankii hore ee xulka qaranka Talyaaniga iyo kooxaha Juventus, Inter Milan, iyo Real Madrid ayaa xabsiga loo taxaabay, waxaana lagu xukumay muddo toban bilood ah oo uu ku jiri doono jeelka.
Booliska wadanka Talyaaniga ayaa qabtay Cannavaro iyo walaalkii Paolo oo hadda u ciyaara kooxda Sassuolo ee horyaalka dalkaas ee Serie A, waxa kale oo ay booliska qabteen xaaska Cannavaro.
Booliska ayaa sheegay in sababta loo xidhay laacibkan dalkiisa u qaaday koobkii adduunka ee sannadkii 2006 ay tahay cashuuro ka badan €1 milyan oo aanu iska bixinin taas oo ku waajibtay hantidiisa khaasatan gurayaha raaxada ah ee uu ku leeyahay dalkaas.
Bilayska ayaa bilaabay baadhitaan, waxaanay laacibkan hore ku amreen in aanu tegi Karin guryihiisa inta ay baadhitaannadu socdaan, hase yeeshee waxa la arkay isaga, walaalkii iyo xaaskiisa oo galay mid ka mid ah guryihiisa raaxada ah isla markaana ku dabbaalanaya berkadda ku taal. Arrintan ayaa keentay xadhiga sida ay boolisku sheegeen, waxaanu ku muttaysan doonaa xadhig toban bilood ah.
Cannavaro oo ay da’diisu tahay 41 jir, xaaskiisa oo lagu magacaabo Daniela iyo walaalkii Paolo waxa ay saddexdooduba ku xidhan yihiin jeelka, waxaana lagu eedeeyey in aanu bixinin cashuuraha muddo shan sannadood ah oo u dhexaysay 2005 illaa 2010, wakhtiyadaas oo uu u ciyaarayay Juventus iyo Real Madrid, isla markaana uu ku jiray damaashaadka farxaddii koobka adduunka ee sannadkii 2006 oo ay u raacday in sannadkaas loo doortay xiddiga dunida ugu fiican.
Cannavaro oo hore ugu soo ciyaaray Parma, waxa uu hadda tababare ka yahay naadiga ka dhisan wadanka China ee Guangzhou Evergrade oo uu ka beddelay Marcello Lippi oo dhawaan iska casilay.
Orodyahan Reer Somaliland Ah Oo Loo Aqoonsaday Xidigii todobaadka Ee Guud Ahaan Maraykanka
Maraykanka Oo Ku Guuleystay Koobka Adduunka Ee Dumarka Markii 3aad Taariikhda
Ciyaaryahan Hore Oo Hargeysa Ka Dhisayo Xarun Kubadda Koleyga Lagu Barto + Sawirro
06/06/2015 Abdiwahab Ahmed